2 04 (iGabapentin 800 mg)
Ipilisi eprintiweyo 2 04 yi-White, Elliptical / Oval kwaye ichongiwe njenge-Gabapentin 800 mg. Inikezelwa nguSun Pharmaceutical Industries Inc.
I-Gabapentin isetyenziselwa unyango lwe i-neuralgia yangasemva ; ukuxhuzula kwaye ikudidi lweziyobisi Iimpawu ze-gamma-aminobutyric acid . Umngcipheko awunakukhutshwa ngaphandle ngexesha lokukhulelwa. IGabapentin 800 mg ayisiyo into elawulwayo phantsi komThetho weZinto eziLawulwayo (CSA).
Imifanekiso ye-2 04
Iimpawu zeGamma-aminobutyric acid
imanitol , iselulosi yehydroxypropyl , i-hydroxypropyl cellulose (uhlobo h), ihydroxypropyl cellulose efakwe endaweni ephantsi , isitashi sengqolowa , glyceryl dibehenate, i-magnesium silicate , wemagniziyam stearate , titanium dioxide , hypromelloses , Polyethylene ethers 400 , ipolysorbate 80
Imifanekiso eyeleleneyo '2 04'
ICefuroxime Axetil I-Pseudoephedrine Hydrochloride Release Release I-SudoGest 12-Iyure
iziphumo ebezingalindelekanga ze-sotalol
minecraft indlela yokwenza tnt
zithini iziphumo ebezingalindelekanga zelosartan
Iziphumo eziphezulu zokulahleka kweenwele
iphi indawo yesixhobo yofikelelo ekhawulezayo
Ngaba i-pc yam ineBluetooth?